Nhau - Bezzia | Bezzia
Actualidad chikamu chakanangidzirwa paawa yekupedzisira ye vanozivikanwa, zviitiko nemapati, pamwe nekuzorora uye tsika. Ichasanganisira nhau dzese dzakanangana nevanhu vane mukurumbira uye hupenyu hwavo hweveruzhinji uye hwakavanzika: kuzvarwa, michato, kupatsanurwa, zviyero, mapato akazvimirira, mubairo galas, nhau pamusoro peshanyo, mafirimu, kuratidzwa kwemabhuku kana zviitiko zvakasiyana.
Kuwedzera pakuve unoenderana-neino munyika yepinki, isu tinodawo kufukidza zvese izvo zvinyorwa zvine chekuita nazvo. zororo uye tsika, kuitira kuti tikwanise kupa runyoro ruzere rwemagariro uye varaidzo yevakadzi.
Pano iwe unogona kuwana iyo yekupedzisira awa yehupenyu hwevatambi, vaimbi nevatambi venhabvu, pamwe neazvino mabhaisikopo emitambo kuburitswa kana kuburitswa kwaDavid Bisbal yazvino dambarefu. Pamusoro pezvo, isu tinoda kuratidzira zviitiko zvazvino kubva kune yakanyanya kuona, kutora zvinoitika munyika yeterevhizheni, mukurumbira kana zvinyorwa.
Aya ndiwo maratidziro echinyorwa che69th cheSan Sebastian Festival
kubudikidza Maria vazquez inoita 18 maawa .
Mangwana iyo 69th edition yeSan Sebastián Festival ichavhurwa. Kusvika Nyamavhuvhu 25, imwe ...
kubudikidza Susana godoy inoita 3 mazuva .
Kune akawanda akateedzana anoonekwa pamapuratifomu. Iwo ma premieres haamire kuitika uye nezvimwe izvozvi, ne ...
kubudikidza Maria vazquez inoita 1 vhiki .
Autumn inguva inokukoka iwe kuti uverenge. Mushure mehupenyu hwakabatikana hwehupenyu hwemagariro uye husimbe ...
Chikamu chitsva che 'La Casa de Papel 5' chakatoburitswa kare. Mwaka mutsva wakakamurwa kuva ...
kubudikidza Maria vazquez inoita Mavhiki e2 .
Semwedzi wega wega tinopa vhiki rekutanga kuti tiwane zvinyorwa izvo zvatisingakwanise kungoteerera chete asiwo kutenga izvi ...
Zvinotaridza kuti chikuva cheNetflix chinoramba chiri chimwe chemapuratifomu anonyanya kuzivikanwa ekutanga kweakateedzana….
kubudikidza Maria vazquez inoita Mavhiki e3 .
Kune vazhinji vedu nhasi vanoteerera pfungwa yekusimudzira munyika yefashoni. Pfungwa yakaoma ...
Nyamavhuvhu mwedzi watinoshamwaridzana nawo nekudzoka kuzviito. Kudzoka kunosanganisira kutangazve maitiro ayo panguva ...
'Munguva yakanakisa': Kubudirira kweNetflix
Ichokwadi kuti maererano nemafirimu uye akateedzana, Netflix ndeimwe yemapuratifomu akakura anogara aine zvese ...
Nyaya dzaunogona kuona paHBO gore risati rapera
kubudikidza Maria vazquez inoita Mavhiki e4 .
Kupera kwaNyamavhuvhu kucharatidza kune vazhinji kupera kwemazororo. Vamwe, kunyangwe isu takanakidzwa ...
Kuburitswa kwakanyanya kwezhizha paAmazon Prime
Amazon Prime zvakare inouya nekabhuku yakanaka yekuburitswa muzhizha rino. Kunyangwe chiri chokwadi kuti kune vazhinji vatove ...